तपाईँको बच्चाले हातगोडा दुख्यो भन्छ ? कारण यस्तो हुनसक्छ - खबर मलाई
५ श्रावण २०७६, आईतवार ५ श्रावण २०७६, आईतवार खबर मलाईLeaveaComment on तपाईँको बच्चाले हातगोडा दुख्यो भन्छ ? कारण यस्तो हुनसक्छ
शारीरिक विकासका क्रममा कहिलेकाहीँ बच्चाको हातगोडा दुख्ने समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्यालाई मेडिकलमा ‘ग्रोइङ पेन’ (बढ्दो उमेरको समस्या) भनिन्छ । बच्चामा किन यस खालको समस्या देखिन्छ त ?
बच्चामा आवश्यक क्याल्सियमको कमीले यस्तो समस्या निम्तिने वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गणेश गुरुङले बताए । ‘बच्चा बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई आवश्यक क्याल्सियमको कमीले जोर्नी तथा हड्डी दुख्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘चुलबुले तथा खेल्ने बच्चाहरूलाई क्याल्सियम बढी चाहिन्छ ।’
बच्चा उमेरअनुसार बढ्न क्याल्सियम अपरिहार्य छ । क्याल्सियम कम हुन नदिन खानपानमा विशेष ख्याल पु¥याउनुपर्छ । हरेक दिन सामान्य मालिस गर्दा पनि बच्चाको दुखाइमा धेरै राहत मिल्छ । कतिपय बच्चामा जोर्नी दुखाइका कारण बाथरोग पनि हुनसक्छ । कतिपय बालबालिकामा बाथको समस्या भने पछि गएर आफैँ ठीक हुन्छ । तर, कतिपयको भने पछिसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँछन् डा. गुरुङ ।
बच्चाको ढाड दुखाइमा भने विशेष ध्यान दिनैपर्छ । ‘प्याथोलोजिकल’ समस्या नभई बच्चाहरूमा ढाडको समस्या हत्तपत्त नदेखिने गुरुङको भनाइ छ । ‘कुनै वेला बच्चाहरूको ढाडको हड्डी स्लिप भइदिन्छ भने कुनैको जन्मिँदै हड्डीमा ‘डिफेक्ट’ हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘जन्मिँदै देखिएको समस्या ट्युमन पनि हुनसक्छ, विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ ।’ बढ्दै गरेको बच्चामा हड्डी तथा जोर्नीमा समस्या देखिने खास कारण भने क्याल्सियमको कमी नै हो ।
क्याल्सियम के मा पाइन्छ ?
डेरी उत्पादन दूध, दही, चिजमा क्याल्सियम सबैभन्दा राम्रो पाइन्छ । सुन्तलाको जुस, चकलेट मिल्क, चाइनिज बन्दागोभी, चिप्ले भिन्डी, ब्रोकाउली, बदाम, माछालगायतमा पनि क्याल्सियमको मात्रा धेरै हुन्छ ।
बच्चाको उमेरअनुसार यस्ता खानामा जोड दिनुपर्छ । उमेरअनुसार बच्चालाई प्रतिदिन यति मात्रामा क्याल्सियम चाहिन्छ :
कति बर्षको बच्चालाई कति क्याल्सियम :
०–६ महिना प्रतिदिन – २०० मिलिग्राम
६–१२ महिना प्रतिदिन – २६० मिलिग्राम
१–३ वर्ष प्रतिदिन – ७०० मिलिग्राम
४–८ वर्ष प्रतिदिन – १,००० मिलिग्राम
९–१३ वर्ष प्रतिदिन – १,३०० मिलिग्राम
शिल्पाको आँशु पुछ्दै नविन
३ बैशाख २०७६, मंगलवार ३ बैशाख २०७६, मंगलवार खबर मलाई
भाइरल ज्वरो : लक्षण र बच्ने उपाय
२० जेष्ठ २०७६, सोमबार २० जेष्ठ २०७६, सोमबार खबर मलाई
पानी सफा देखिँदैमा शुद्ध हुँदैन, पानी शुद्धिकरण उपायहरु
३० असार २०७६, सोमबार ३० असार २०७६, सोमबार खबर मलाई